राधा अंग्रेजीमा आएपछि म खुसी किन ? - Durbin Nepal News
राधा अंग्रेजीमा आएपछि म खुसी किन ?
विष्णु शीतल २४ पुष २०७४, सोमबार २२:१८
लेखक कृष्ण धराबासीलाई केही बर्षअघि नै भनेको थिएँ-राधामा जादू छ । धराबासीले एउटा कृति तयार गर्न झण्डै २ बर्षअध्ययन गरेर अभ्यास गरेको यो नै एक मात्र पुस्तक हो । लेखक धराबासी झण्डै दुइ दर्जन सिर्जनाका श्रष्टा हुन । महाभारत र कृष्ण चरित्रको सुक्ष्म रुपले अध्ययन गरेर त्यसलाई नेपालको झापास्थित किच्चक बध भन्ने स्थानको नामाकरणसँग जोड्दा पाठक,लेखक,पत्रकार र आफूलाई साहित्यका बुझक्कड ठान्नेहरु पनि एक पटक अल्मलिएको हो कि भन्ने ठान्छन र तुरुन्तै मेसो पाइहाल्छन ।
कतिपय धार्मिक ग्रन्थ पढेकालाई पनि राधाको खास परिचय थाहा हुदैन । धेरैलाइ राधा भगवान कृष्णजीकी धर्म पत्नी हुन भन्ने भ्रम पनि हुन सक्छ । वास्तवमा राधा आस्था ,प्रेम र भक्तिकी प्रतीक हुन । भगवान कृष्णकी अविवाहित सखी हुन । आदर्शकी प्रतिमूर्ति हुन ।
राधा जब मदन पुरस्कार गुठीको छनोटमा परेको समाचार बाहिर आयो, त्यो बेला मलाई लाग्यो – राधाप्रति मेरो बुझाइमा कुनै व्दीविधा छैन । म दंग पनि परेँ । एक दशक पार गरे पछि राधाले फेरि अर्को छलाँग मार्‍यो । यसको अंग्रेजी संस्करण अमेरिकाबाट प्रकाशित भयो । नेपाली साहित्यमा मदन पुरस्कार पाएका कृतिमध्ये अंग्रेजी भाषामा अनुवाद भएर अमेरिकालगायत संसारको अंग्रेजी बजारमा सहजै प्रवेश गरेको यो एक मात्र नेपाली पुस्तक-कृति) हो भन्ने दावी रहेको छ । मेरो दावीसँग लेखक धरावासी सहमत देखिनुभएको छ । अमेरिकालगायतको विश्व बजारमा बार्न्स एण्ड नोवलले आफ्ना आउटलेटहरुमा राखेर बेच्न थालिसकेको छ । यसैगरी अनलाईन बजारको अग्रपंतीमा रहको अमेजन डट कममा राधा सजिलै अर्डर गर्न सक्नु हुन्छ ।
नेपाली लेखक पाठकका लागि मात्र हैन नेपाल बाहिर रहेका नेपाली भाषी समुदायका दोश्रो पुस्ता जो अंग्रेजी पढ्न बढी रुचाउछन र नेपाल,नेपाली भाषा साहित्यको बारेमा जान्न पनि चाहान्छन उनीहरु यसबाट धेरै लाभान्वित हुनेछन । राधा उनीहरुका लागि उत्कृष्ठ र उपयुक्त पुस्तक हो भन्ने मेरो बृझाई रहेको छ । हामी नेपाल बाहिर हुर्किदै गरेको नयाँ पुस्तालाई नेपाली संस्कार,संस्कृति,नेपाली पन र पहिचान सिकाउन चाहान्छौं । तर नेपाली साहित्यलाई अंग्रेजी भाषामा अनुवाद गरेर उनीहरुलाई सहजै उपलब्ध हुने वातावरण बनाइदिदैनौं भने हामी यसमा अवश्य चुक्ने छौं । हामी चुकिरहेका छौं । नेपाली भाषा साहित्य संस्कृति भूगोल इत्यादिका बारेमा भारतीय लेखकहरुले जे जसरी बुझेका छन, तीनै सामग्री अंग्रेजी भाषामा उपलब्ध छन र हाम्रो दोश्रो पुस्ता र नेपालबारे जान्न चाहाने सबैले त्यही पढ्दै आएका छन जसमा गंभिर गल्तिहरु भएका छन । ठूला ठूला भ्रमहरु छन । तैपनि हामी लेखकहरु नेपालका ठूला कृतिहरु अंग्रेजी भाषामा अनुवाद गरेर अन्तराष्ट्रिय बजारमा पठाउन चुकिरहेका छौं । अब थोरै भए पनि खृुसी मान्न सकिन्छ यसको शुरुवात राधाले गरेको छ । अंग्रेजी भाषामा अनुवाद गरिएका र नेपाली सिद्ध हस्तव्दारा लिखित पुस्तक गुगल र्सच गर्दा वा अमेजनमा खोज्दा अंग्रेजी बजारमा केवल राधा मात्र भेटियो । विजय पाण्डेको खुसी पनि भेटिएको थियो तर यो कृति नेपाली भाषामा मात्र उपलब्ध छ ।
अब हामी भन्न सक्छौं कि नेपाली साहित्यिक कृतिहरु अनुवाद गरेर अमेरिकी प्रकाशकव्दारा प्रकाशित गर्ने र अमेरिकी विक्रेता एजेन्सीहरुव्दारा बजारमा सहजै लैजान सकिन्छ । राधाले यो प्रमाणित गरिसकेको छ । नेपाली साहित्यिक कृतिहरुका लागि यो एउटा नयाँ फड्को अवश्य हो । राधा त्यस्तो उदाहरण हो कि नेपाली भाषा साहित्यलाई सहजै गैर नेपाली भाषी पाठक र विक्रेताको आउटलेट हरुमा पुर्‍याउन सकिन्छ । अब डायसपोरा नेपाली समुदायका प्रत्येक सदस्यले आफ्ना नानीहरु मार्फ नयाँ पुस्तामा जाने र आफ्ना गैर नेपाली भाषी सहकर्मीहरुमार्फ अंग्रेजी भाषी पाठकहरुलाई नेपाली साहित्य पढाउने वा नेपाल सम्बन्धी जानकारी गराउने बाटो पनि राधाले खोलिदिएको मैले ठानेको छु । यसका लागि विश्व विद्यालयहरुमा रहेका नेपाली विद्यार्थी संघहरुलाई परिचालन गरेर त्यहाँको पुस्तकालयमा विक्री गर्ने र यसको व्यापक प्रचार प्रसार गर्ने काम गर्न सकिन्छ । त्यस्तै गैर आवासीय नेपाली संघ-एनआरएन) संजाल पनि अंग्रेजीमा अनुवादित नेपाली कृतिहरुलाई गैर नेपाली भाषी पाठकसम्म पुर्‍याउने माध्यम बन्न सक्छ । यसरी नै नेपालका कुटनीतिक नियोगहरुले पनि राधा जस्ता कृतिहरुलाई गैर नेपाली समुदायमा पुर्‍याउन भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन । उनीहरुले विदेशी संघ संस्थाहरुसँग समन्वय गरेर पनि यस्ता नेपाली कृतिहरुलाई विस्तार गर्न मद्धत गर्न सक्छन । यसबाट एउटा लेखक मात्र लाभान्वित हुने हैन कि सिंगो नेपाल र नेपाली समुदायको प्रबर्द्धन हुने भएकाले यो सबैको दायित्वभित्र पर्दछ भन्ने मेरो बुझाइ छ ।
२४ पुष २०७४, सोमबार २२:१८ मा प्रकाशित